Raggii burburka iyo tafararuqa maanta yaalla SSC horseeday talo marti ma looga noqon karaa? | Welcome to Lafweyne.com|
Raggii burburka iyo tafararuqa maanta yaalla SSC horseeday talo marti ma looga noqon karaa?
Indhasheel ma shan sannadood iyo burbur, barokicin iyo baaba farabadan dabadeed ayuu miyirsaday? Ma gidaarkii buu soo taabtay? Ma qorshe kalaa isu sawiray? Mise waa qalbi lakac cusub.
Indhasheel & Galaydh oo ka qayb galay Caleemasaarkii Boqor Burhan, (Sawir Hore)
Maanta wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dad kala afkaar duwan oo degaannada SSC kasoo jeedaa isu yimaaddaan oo cid waliba soo bandhigtaa afkaarteeda si xor ah. Fikirkani waa fikirkii lagu kari waayey 5 sano ka hor ee la lahaa “cidna loo jiijin maayo”. Haddaba intii dadka afduubtay ee keligeed talada qarqooratay miyaanay gar ahayn in lagala xisaabtamo wixii burur, barokac, iyo baaba ku dhacay dadka SSC. Sidoo kale miyaanay habboonayn inay xishoodaan oo dib u fadhiistaan si dad caafimaad qaba oo aan waxba loo tirinayni ay dadka isugu soo dhoweeyaan. Haddayse xishoon waayaan miyaanay ahayn in la iska xakameeyo?
Indhosheel wuxuu ka hadlay in waajibaadka Khaatumo ahaa “xorayn iyo midayn”. Bal hadda isweydiiya dhammaan degaannada gacanta Somaliland galay laga bilaabo 2012-2017 waxay dhammaantood wareegeen xilliigii Indhasheel sheeganayey inuu Madaxweyne Khaatumo yahay (2012-2014). Kuna darsada khilaafaadka iyo tafaraaruqa reeraha dhexdooda ku dhacay waxay dhammaantood dhaceen ama soo bilaabmeen muddadii Indhasheel wax qasayey.
Waaba yaabka yaabkiise, waayo cidda Indhasheel uu ku eedaynayaa “Xoraynta iyo Midayna” mar haddii dhibkii ugu weynaa dhacay xilligii Indhasheel talada degaanka dusha saartay? Gari Allay taqaannaaye anigu garan maayo degaanno cusub oo gacanta Somaliland galay muddadii Dr. Galaydh la daala dhacayey taladii uu isku saaray togga Eerigo.